Kharashaadka Horyaalka Premier League Oo Hoos U Dhacay Ku Dhawaad Toban Sano Kadib
HomeHoryaalka IngiriiskaKharashaadka Horyaalka Premier League oo hoos u dhacay ku dhawaad toban sano kadib
February 2, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Waxaa gebi ahaan hoos u dhac laga dareemay kubada cagta gaar ahaan Suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada Sababo la xariira Covid 19 marka dib loo eego taariiqda suuqa ciyaartoyda sanadkaan si aad ah ayuu uga qiimo yar yahay xilli ciyaareedkii hore oo Suuqa lagu bixiyey lacago garayey 230 milyan oo ginni.
Suuqa kala iibsiga oo xirmay dabayaaqadii Isniinta Kharashaadka ayaa si isdaba joog ah kor ugu kacay sanadka marka laga reebo bisha Janaayo ee 2019 oo eheed £ 180 milyan, laakiin saameynta joogtada ah ee garoomada madhan iyo dakhliyada baahinta ayaa sii adkeeyay in la ogaado in isbeddelku dib u bilaaban doono.
Tim Bridge oo ka tirsan Kooxda Ganacsiga Isboortiga ee Deloitte ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Britain ee Press Association: “Waxay u badan tahay waqtiga ugu adag ee la saadaalin karo waxa suuqa kala iibsiga uu u ekaan doono 12 ama 18 bilood.
Waxaan u maleynayaa in habka waaxyada kala iibsiga ee naadiyada ay u shaqeeyaan hadda, inta badan waa mid cilmi ah ama lafagur ah hadda waa wax aad u adag in la hubiyo inaad xogta saxday.
Waxa kale oo caqabad ku ah in la sameeyo nooc kasta oo qiyaaso ah oo ku saabsan waxa mustaqbalka suuqa u ekaan karo. Waxaan u maleynayaa inay kuxirantahay dhowr arrimood.
Ku soo celinta taageerayaasha garoonka waxay muhiim u tahay qaabka ganacsiga ee naadiyada kubbadda cagta, ka dibna sida qaabka ganacsigu u falcelinayo.
Amad Diallo oo ka tirsan kooxda Manchester United, Aston Villa wiilka cusub Morgan Sanson iyo lammaanaha West Brom Mbaye Diagne iyo Robert Snodgrass ayaa ka mid ahaa saxiixyada joogtada ah ee heerka sare iyadoo kooxaha ay gaareen go’aanka ah inay ku tiirsanaadaan kooxdooda haatan jirta ama ay ku tiirsan yihiin amaahda.
Liverpool ayaa amaah ku bixisay difaac aad loogu baahnaa oo kamid ahaa Schalke Ozan Kabak, oo ay weheliso heshiis joogto ah oo qiimo jaban oo loogu talagalay Preston’s Ben Davies, halka Martin Odegaard uu dhameystiray Arsenal) iyo Jean-Philippe Mateta Crystal Palace ay ahaayeen ku meelgaar kale.
In kasta oo kaliya 7 milyan oo ginni lagu kharash gareeyay maalinta kama dambaysta ah, oo ka hoosaysa £ 25 milyan sanadkii ka hore ganacsigii Janaayo wuxuu qaatay qarashkii Premier League ee xilli ciyaareedka ilaa £ 1.4 bilyan.
Bridge wuxuu dareemayaa shaki la’aan inuu sii jiri doono laakiin waxaa jiri kara ka-faa’iideystayaal ka mid ah qarash dhimista.
Waa caadi in la helo muddo dakhli ah oo aad seegtay, laakiin haddii taasi ay tahay mid joogto ah waqti ka dib markaa si joogto ah qaabka ganacsiga ee naadiyada waa in la beddelaa ayuu yidhi.
Haddii taasi u gudubtay xilli ciyaareedkii 2021/22 iyo wixii ka dambeeya, markaa waxaad filan lahayd inaad ku aragto isbeddel dabiici ah suuqa kala iibsiga.
Xaqiiqdii waxay noqon doontaa dhowr daaqadood oo xiiso leh waxaanan u maleynayaa marka loo eego, marka la barbar dhigo wixii aan horey u aragnay, kooxaha qaar waxay dareemi doonaan inay gorgortan ka galeen suuqa kala iibsiga.
Halka ay markii hore ku qarash gareyn lahaayeen ilaa 50 milyan ginni, ciyaaryahan ayaa laga yaabaa inuu heli karo £ 30-40 milyan iyadoo lagu saleynayo xaalada kooxda iibinta waqti cayiman. Waa mid si xiiso leh loo daawado.